Izay no fanomezana tsara - Church of the World of God Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-04 > Inona no fanomezana tsara?
Izao no nosoratan’ny apostoly Jakoba tao amin’ny taratasiny: “Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia midina avy any ambony, avy amin’ny Rain’ny mazava, izay tsy misy fiovana, na fiovan’ny mazava sy ny maizina.” ( Jakoba . 1,17).
Voalohany indrindra dia misy ny tenin’i Jesosy hoe izay mino ny Zanaka Lahitokan’Andriamanitra no hovonjena. Voavonjy avy amin'ny inona? Hovonjena amin’ny tambin’ny ota izy, dia ny fahafatesana mandrakizay. Toy izany koa, Jesosy dia niresaka ny amin’ilay mpamory hetra nitsangana teo an-kianjan’ny tempoly ary niteha-tratra ka nanao hoe: “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota!” Lazaiko aminareo fa nidina tany an-tranony nohamarinina izy (Lioka 18,1314).
Betsaka ny antony tsy mamela antsika ho irery ny tsy fahombiazantsika taloha. Izany no mahatonga ny olona sasany mankany amin'ny psikology mba hahazoana vahaolana. Tsy misy torohevitry ny olombelona afaka manao izay vitan’ny ra nalatsak’i Jesosy. Amin’ny alalan’i Jesosy ihany no ahafahantsika mahazo antoka fa voavela ny helotsika, na tamin’ny lasa sy ny ankehitriny, na amin’ny hoavintsika aza. Ao amin'i Kristy irery ihany no afaka. Araka ny voalazan’i Paoly dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy (Romana 8,1).
Ankoatra izany, dia manana toky isika fa rehefa manota indray ka “miaiky ny fahotantsika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra” (1. Johannes 1,9).
Nilaza koa i Jesosy fa ny Rain’ny Fahazavana, Mpanome fanomezana tsara, dia hanome antsika ny fanomezana ny Fanahy Masina – mihoatra lavitra noho izay azon’ny ray aman-drenintsika olombelona atao ho antsika. Nanome toky ny mpianany izy fa handeha, fa ny fampanantenan-drainy, araka ny voalaza ao amin’ny Joela 3,1 nambara fa ho tanteraka izay nitranga tamin’ny andro Pentekosta. Nidina teo amin’izy ireo ny Fanahy Masina ary tao anatiny sy niaraka tamin’ny Kristianina mino rehetra hatramin’izay.
Raha nandray an’i Kristy sy nandray ny Fanahy Masina isika, dia tsy nandray ny fanahin’ny tahotra, fa ny fanahin’ny hery sy ny fitiavana ary ny fahamalinana (2. Timoty 1,7). Io hery io no mahatonga antsika hahatohitra ny fanafihan’ilay ratsy, hanohitra azy, ka mandositra antsika izy.
Galatianina 5,22-23 milaza ny vokatry ny Fanahy Masina ao anatintsika. Misy lafiny sivy amin'ity voankazo ity manomboka amin'ny fitiavana. Satria Andriamanitra no tia antsika voalohany, dia afaka “tia an’i Jehovah Andriamanitsika amin’ny fontsika rehetra sy ny namantsika tahaka ny tenantsika” isika. Zava-dehibe tokoa ny fitiavana ka ao anatin’i Paoly 1. Ny Korintiana 13 dia nanoratra famaritana momba azy ireo ary namaritra ny mety ho toetrantsika amin’ny alalan’izy ireo. Nanatsoaka hevitra izy fa misy zavatra telo mitoetra - ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra.
Taorian’ny fitopolo taona nahafahako nanana fiainana voatahy tamin’ny naha-Kristianina nanolo-tena ahy, dia afaka miombon-kevitra amin’ny tenin’i Davida Mpanjaka aho hoe: “Ny marina tsy maintsy mijaly mafy, fa Jehovah no mamonjy azy amin’izany rehetra izany.” ( Salamo 3 ).4,20). Nisy fotoana aho tsy nahay nivavaka, ka voatery niandry tamim-pahanginana, ary rehefa nitodika tany aoriana aho dia hitako fa tsy irery aho. Na dia nanontany tena momba ny fisian’Andriamanitra aza aho, dia niandry tamim-paharetana Izy hanampy ahy hivoaka amin’ny krizy sy hanandratra ahy mba hahitako ny halehiben’ny voninahiny sy ny zavaboariny. Tamin’ny toe-javatra toy izany, dia nanontany an’i Joba izy hoe: “Taiza moa ianao, fony Aho nanorina ny tany?” (Joba 38,4).
Hoy koa i Jesosy: “Fiadanana no avelako ho anareo, ary ny fiadanako no omeko anareo. […] Aza matahotra na matahotra » (Jaona 14,27). Ao anatin'ny filàna faran'izay mafy dia omeny fiadanana izay mihoatra lavitra noho ny fahalalana.
Fanampin’izany, dia omeny antsika ho fanomezana ambony indrindra ny fiainana mandrakizay sy ny fanantenana mahafaly ny hiaraka aminy mandrakizay, izay tsy hisy intsony ny fijaliana sy ny fanaintainana ary ny ranomaso rehetra hofafana (Apokalypsy 2.1,4).